China K usoro reciprocating coal feeder rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
-Dị ụdị K na-azụkọ nri na-eji ihe mkpuchi njikọ njikọ iji dọrọ efere ala nke nrịgo 5 iji gbadaa ala iji mee ka ọkpụkpụ na-agagharị agagharị, ka ọ bụrụ na ị na-agbapụta kol ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-enweghị ntụ na ntụ ntụ na obere ihe na-egweri ihe na obere viscosity si Ngwakọta nri na ngwa nnata.
-Dị ụdị K na-azụkọ nri na-eji ihe mkpuchi njikọ njikọ iji dọrọ efere ala nke nrịgo 5 iji gbadaa ala iji mee ka ọkpụkpụ na-agagharị agagharị, ka ọ bụrụ na ị na-agbapụta kol ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-enweghị ntụ na ntụ ntụ na obere ihe na-egweri ihe na obere viscosity si Ngwakọta nri na ngwa nnata. K-ụdị reciprocating feeder adabara maka iga nnukwu ihe na mines, mines, kol nkwadebe osisi, nyefe ụgbọ, kol njikwa uloru, n'ọdụ ụgbọ mmiri nnukwu ihe ọnụ, wdg ọ nwere ike ịnyefe nnukwu ihe na belt ebu ma ọ bụ ndị ọzọ echetakwa akụrụngwa na nchekwa ngwaọrụ site na silo ma ọ bụ ozugbo. Ghọta nri edo edo, aja aja, ọka na ihe ndị ọzọ
Akụrụngwa a nwere ike ị na-eri kọm ọkụ site na bonka na-ebufe ma ọ bụ na-ebu ihe ndị ọzọ na-enyocha, nke kwesịrị ekwesị maka m na nkwadebe coal.
1. Structure: unyi feeder mejupụtara foneelu, reducer, nkịtị moto, nnyefe n'elu ikpo okwu, nnyefe usoro, ala efere (coal nri efere), coal nri ahu, ala na ọnụ ụzọ ámá.
2. cikpụrụ: site na reducer na crank njikọ mkpanaka usoro, na moto draịva ala efere na-eme linear reciprocating ngagharị na ala, ka iji uniformly ibudata ihe na ebu ma ọ bụ ndị ọzọ echetakwa akụrụngwa.
E nwere ụdị abụọ nke coal feeder owuwu: na inye iwu n'ọnụ ụzọ ámá na-enweghị inyekwa ọnụ ụzọ ámá.
Arụpụta na inye ọnụ ụzọ ámá nwere ike na-achịkwa ọnụ ụzọ ámá, na arụpụtaghị depụtara na tebụl n'elu bụ arụpụtaghị mgbe gbanwee ka kacha ọnọdụ (Ẹkot na-enweghị inyekwa ọnụ ụzọ ámá).
Ntinye na ojiji nke udiri udiri udiri uzo K (feeder)
1. A na-edozi feeder coal na-emeghe n'okpuru oghere nke nchekwa nchekwa. Tupu echichi, ọ dị mkpa iji chọpụta ọnọdụ kwụ ọtọ, tinye eriri na oghere na-emeghe ya na bolts, wee debe ikpo okwu na ọnọdụ ziri ezi, gbanye H-etiti ahụ na etiti ahụ na usoro nnyefe ahụ, kwụzie ma wụnye onye na-emegharị ihe na moto, gbanwee n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma jikọta ya na bolts.
2. Mgbe echichi nke coal feeder na-agbanwe agbanwe, a naghị achọ ịgba ọsọ ọsọ. N'oge ọrụ, lelee ma akụkụ niile ọ na-arụ ọrụ ọ bụla, na ịrị elu okpomọkụ nke ịgbagharị agagharị agaghị adị elu karịa 60 ℃.
3. Mgbe ị na-agbanwe arụpụtaghị ihe dị ka ihe a na-ebudata na-ebudata, dọpụta ọkpọ ahụ na akụkụ crank ahụ, belata mkpụrụ ahụ, gbanwee ọnọdụ "1,2,3,4 ″ nke shei crank iji họrọ ọnọdụ ahụ edozi, tinye ya pin okporo, jikọọ crank na crank shei, ikesiike pin aro na aku, na mgbe ahụ na-amalite na engine mgbe ukpụhọde.
Ndozi kwa ụbọchị na mmezi nke ụdị K na-emegharị ọkụ ọkụ (nkwụghachi azụ):
1. Tupu ọrụ nke onye na-eri nri, e kwesịrị inwe ezigbo ọkụ ọkụ na bonka iji zere mmetụta kpọmkwem na ala (efere nri nri) mgbe ị na-ebu kol n'ime ebe ahụ.
2. Mgbe ịga n'ihu n'ọrụ kwa ọnwa, lelee ma akụkụ akụrụngwa adịghị na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ dị iche iche, mezie ha ozugbo.
3. A ga-arụzi ma ọ bụ dochie mpekere nke ikpuchi ihe na-eme ka a na-edozi ya na icheku ọkụ ma ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ ya karịrị ọkara nke mbụ ahụ.
Ọ bụrụ na akụkụ ndị na-agbanwe agbanwe anaghị arụ ọrụ nke ọma ọnwa isii, ha kwesịrị dochie ya ozugbo.
Mmezi nke akụkụ ndị bụ isi nke feeder coal:
a. Reducer: lelee kwa ọnwa isii, ma hichaa ihe na-agba ọsọ na igbe ma ọ bụ gbanwee mmanu mmanu.
b. Motor: dị ka mmezi chọrọ nke moto.
Nke gara aga: HGM usoro ọrụ vibration coal feeder
Osote: ZG jijiji feeder
Chain echebe eriri
Akpụkpọ anụ na-eme ka ọkụ gbaa ọkụ maka Ngwuputa
Ihe na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ
K Codị Nji nri
Ighaghachi Nri nri